Maka: siqala | Martech Zone
Ukunyuka kweNtengiso yeNtengiso yeenjongo
Uyakundifumana rhoqo kwiingxoxo ezinkulu kwi-intanethi ngayo nantoni na enxulumene nezopolitiko, inkolo kunye nobungxowankulu… onke amaqhosha ashushu abanjwa ngabantu. Kungenxa yoko le nto ndinendawo yokuhlala kunye neyophawu lwamajelo eendaba ezentlalo. Ukuba ufuna ukuthengisa kuphela, landela uphawu. Ukuba uyandifuna, ndilandele… kodwa ulumke… uyandifumana. Ngelixa ndingongxowa-nkulu ongagungqiyo, ndinentliziyo entle. Ndiyakholelwa ukuba kufuneka sincede omnye